Mhepo Kusanganiswa, Makirindiro, Mavharuvhu, Fittings - SNS Pneumatic
Kuti usangane nehupamhi indasitiri minda kunyorera, SNS ine akawanda akateedzana eFR modular uye mweya kumanikidza kudzora michina. Iine hunhu hwakavimbika uye hwakagadzikana kweanopfuura makore makumi maviri, SNS mweya sosi yekurapa mayuniti inogara iri sarudzo chaiyo kune vatengi.
SNS inogadzira mavharuvhu nekusarudza kwakasimba kwenzvimbo dzese dzinosanganisira aluminium, coil, chitubu, chisimbiso, girisi, magineti… kubva kune akateedzana eChina nevatengesi vepasirese. Iyo yakakwira chaiyo machining uye yakanyanya kudzora maitiro kune ese epakati zvikamu uye kuungana / kuyedza inoita yega SNS vharafu mhando yepamusoro vimbiso uye kugadzikana. Kutsigira kuwedzera kwezuva nezuva indasitiri zvitsva zvinodiwa, SNS inoramba ichikudziridza nhanho nyowani gore rega. Kusvika parizvino, isu tine solenoid vharafu, yemvura vharuvhu, mweya vharuvhu, kupomba vharafu, tarisa vharuvhu, kuyerera kudzora vharuvhu, zvemagetsi vharafu, ruoko vharafu, tsoka vharuvhu, nekukurumidza chiutsi vharuvhu, shuttle vharafu, nezvimwewo.
Iyo pneumatic accessories zvakare akakosha uye anodikanwa kune pneumatic masisitimu kunyanya hosipa uye fittings. SNS ine anopfuura makumi maviri-makore ruzivo rwekugadzira iyo fittings, ikozvino isu tine akasiyana marudzi epurasitiki kusunda mune fittings, simbi kusunda mune fittings, pneumatic connectors, pneumatic fittings, PU tubing, PA tubing, mweya silencers, kumanikidza gaji, mweya pfuti, nezvimwewo SNS inogadzirisawo zvigadzirwa kana vatengi vaine zvakakosha zvinodiwa. VERENGA ZVAKAWANDA
SNS inopa yakatambanuka pneumatic humburumbira masitaira ekutsigira iyo otomatiki indasitiri sisitimu, kusanganisira yakajairwa pneumatic masilinda uye asiri eyakajairwa pneumatic masilinda. Iyo pneumatic cylinder masitayera inosanganisira tayi-tsvimbo humbwe, mini humburumbira, compact silinda, mbiri pisitoni humburumbira, mutserendende humbwende, isina humbwa, pneumatic gripper, tsono silinda, inotenderera humburumbira, yekunamatira rotary humburumbira, nezvimwe. Nemhando yepamusoro CNC muchina, marobhoti uye otomatiki kuungana uye kuyedza, SNS yave inotungamira yekutengesa michina indasitiri.
Isu tine zvakare chidimbu chidiki chemagetsi zvigadzirwa: kuvhunduka absorbers, hydraulic mavharuvhu, hydraulic kumanikidza switch uye hydraulic cylinder.
Kuve ne5 Mabhesi Ekugadzira
Makambani Anopfuura Makumi maviri Anotsigira
Vazhinji Kupfuura 1000 Vashandi
Iyo Kambani Inovhara Nzvimbo Ye30000㎡
Kunze kwekunaka, hunosimbisa mhando uye mutengo unoshanda ndizvo zvatino tevera.
SNS 4V2 Series Aluminum chiwanikwa Solenoid Valve Ai ...
Chigadzirwa Chigadzirwa & ...
SNS APU10X6.5 Wholesale pneumatic hosipaipi mhepo S ...
Chigadzirwa Chigadzirwa ...
SNS SC Series aruminiyamu chiwanikwa kaviri / kuroora chiito ...
Kukura Kwakakura (mm) 32 ...
SNS AC Series pneumatic mweya sosi yekurapa un ...
Muenzaniso AC1010-M5 AC2 ...
SNS 2W akateedzana eremendi chinhu chakanangana-kuita typ ...
Muenzaniso 2W025-08 2W0 ...
SNS MOV akateedzana pneumatic echinyorwa kudzora roller ...
Chigadzirwa Chigadzirwa & n ...
SNS SPC Series Male Thread Yakarurama Brass Push ...
SPC Series 8 Pipe dhayamita ...
SNS SPL Series Male Elbow L mhando Plastic hosipaipi c ...
2021 China (Beijing) International Hydraulic Pneumatic uye Sealing Technology Exhibition
Kukadzi / 25/2021
2021 China (Beijing) International Hydraulic Pneumatic and Sealing Technology Exhibition ichaitirwa kuChina International Exhibition Center kubva munaJune 28 kusvika 30, 2021! Ichakwevera anopfuura makambani mazana masere kubva kunyika dzinopfuura gumi nenzvimbo dzinosanganisira ...
Gore rino, SNS haina kungopfuudza chitupa cheyekutanga batch yeepamusoro-tech mabhizinesi muZhejiang Province mu2020, iyo serial nhamba iri 2583. Uye akahwina iyo "Zhejiang Science uye Technology Diki uye Pakati-saizi" chitupa chakapihwa neZhejiang Science uye Techn ...
SNS pneumatic inotora chikamu muPTC Asia simba rekufambisa Expo 2020
Ndira / 23/2021